Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ụgbọ ala akụrisị ndị na - agba ịnyịnya? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Car na-akụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè - kedu ka anyị si edozi
Car na-akụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè - kedu ka anyị si edozi
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ụgbọ ala akụrisị ndị na - agba ịnyịnya?
Kwesịrị ịkpọ ndị uwe ojii, yana ụgbọ ihe mberede makaonye na-agba ígwèozugbo ọ dị mmaimeya mere. Naonye na-agba ígwènwere ike isi ọnwụ na ha dị mma ma ha nwere ikekụrụisi ha, ma obu ha nwere ike no na onodu ujo. Ọ ka mma ịnọ na nchekwa karịa nwute, yabụ ọ kacha mma na ha ga-enyocha onwe ha.
N'ihi ya, anọ m ịnyịnya ígwè na-arụ ọrụ kemgbe m dị afọ 18. Nke ahụ bụ oge gara aga. Mụ na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ụfọdụ, ndị nọ n'ụgbọala, ịmara na ndị mmadụ ga-eme gị ihe ike mgbe ị bara n'etiti n'okporo ámá, ma ọ bụ ha ga-eti gị mkpu, 'pụọ n'okporo ámá!' Ihe di otua.
Adara m igwe kwụ otu ebe ugboro ole na ole, n'ike nke aka m, mana ruo nso nso a, anaghị m agba ọsọ. N'ihe dị ka otu ọnwa gara aga, otu nwanyị na-anya obere Honda limousine kụrụ m na n'etiti ụzọ a na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na obere foto nke ịnyịnya ígwè, echere m na ọ siri ike ịhapụ m, mana ọ ka kpọọrọ m ghọtara na Echeghị m echiche banyere ihe m ga-eme mgbe ụgbọ ala kụrụ gị n'ịnyịnya igwe gị. Mgbe ị na-enwe ike ime ihe ọ bụla na niile, na bikers adịghị mgbe niile na-eje ije pụọ n'ihe ndị ahụ.
Ya mere agara m na Ngalaba Uweojii na Seattle maka ngwa ngwa ihe, ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla, m na-enwu enwu ma m nwetara ya. I ma na obi di m uto na o kwusiri. Ihe m mere ozugbo bụ na m na-awagharị n'okporo ámá ma na-eti mkpu 'FUCK' ugboro ugboro mgbe ọ nọ ọdụ n'ụgbọ ala ya, nọ ọdụ na-eche ihe mere n'ụwa.
N'ịchọ adrenaline, mgbe ụfọdụ, ị ga-enwerịrị ọkụ tupu ịmalite mkparịta ụka nwere ọgụgụ isi. Yabụ mgbe ahụ - yabụ mkparịta ụka ọgụgụ isi emeghị eme n'ezie. Uredgbọala ndị ahụ echebere, yabụ n'eziokwu m chere, sị, 'Oge isi n'okporo ụzọ pụọ.' Ọ na-ele ụdị anya ala hụ m ka m na-agba ọbara ma gbanwee dị ka mpempe akwụkwọ.
You makwaara na m ụdị ule anwale. Uzo abuo yiri ka o na aru oru. M weere igwe mnya igwe, ụdị ogho na wiil, wee laa n'ụlọ.
emega ahu wedata obara obara gi
Ọfọn, m na-atụ aro ihe ndị a. Ọ bụrụ na ị kụrụ na-agbalị nọrọ jụụ ka anyị mee ya mgbe e mesịrị; mgbe ahụ anyị ga-anwa ịnwe mkparịta ụka ka amamịghe, mara mma karịa mgbe ị naghị abụ ọnụ nkọcha niile ebe ndị ọkwọ ụgbọ ala ndị ọzọ niile nọ n'azụ. Maka na ị na-eche nrụgide ahụ, na-akwa emo na Seattle na-akwa emo.
Nke a na shit bụ n'ezie. Ọ bụ, chi m, ị na-eche na ị na-mere ya n'ihu. Mgbe ị kwuru, 'Nwoke ahụ, nwoke ahụ!' Naanị pụọ n'okporo ámá wee kpọọ 911.
Echere m n'ezie na m mere ihe ike Seattle ihe. Biri na ihere gi. Na-ebi ya.
Ahụrụ m ya ka ọ dị, ahụrụ m ihu ya ka ọ na-acha ọcha ka ọ hụrụ na m na-agba ọbara ebe niile wee chee, “Ee, ee - ee, ị riri ya. I mere m ihe a. “Ya mere, ọ dịtụla mgbe ụgbọ ala kụrụ gị ka ị na-agba ịnyịnya ígwè gị? Oh, M - onye chụpụrụ ebe a na-adọba ụgbọala Trader Joes ahụghị m.
Na m ụdị mere sleek, Starsky & Hutch body roll over the hood, n'ezie jisiri ike rituo n'ụkwụ m, tinye mkpụkọ ụkwụ mara mma n'ụgbọ ala ha na mkpịsị ụkwụ akpụkpọ ụkwụ m Gịnị ka ị mere? Echere m na m guzo n'ebe ahụ na-eti mkpu, 'Heyyyy.' O wee tie mkpu 'Ndo!' wee pụọ. E nwere ajọ ikpe ọmụma.
rad ike anyịnya igwe nyocha
Oh ee, abụba m. Dị ka oke ka m nwere ike ịhụ gị you hụrụ m ugbu a? You na - N’ezie ka m dị mma, abụ m naanị otu plasta ugbu a. Mana achọchara karama niile nke Neosporin ebe ahụ nwa oge, igbe gauze.
Ekwenyere m n'ezie na m nwere ọkpụkpụ ọhụrụ n'ikpere aka m. Ọ dịka okpu ikpere m. Ọ bụ - Echere m na ọ dị mma.
Ma ọ bụghị ihe na-akpa ọchị? Ọ bụghị ihe ọchị. Ederede nke ndị obodo Amara.org
Nye kpatara ya ma ọ bụrụ na ụgbọ ala agbaa ịnyịnya ígwè?
Na ihe mberede metụtara aigwe kwụ otu ebe-nkeụgbọ alankwekọrịta, ụgwọ a na-ekenyekarị onye ọkwọ ụgbọ ala n'ihi enweghị nchebe enyere ndị na-agba ịnyịnya ígwè.
Gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na m kụrụ onye na-agba ígwè?
Ọ bụrụị na mberedekụrụ onye na-agba ígwè, kwụsị ozugbo ma lelee mmerụ ahụ.Ọ bụrụdị mkpa, kpọọ ụgbọ ihe mberede.Ọ bụrụihe ọghọm ahụ pere mpe, kpoo ụgbọ ala gị n'ụzọ okporo ụzọ ma kpọọ ndị uwe ojii.19.05.2015
kedụ ihe ịgba ịnyịnya ígwè na-emere ahụ gị
Kedụ ohere ịnweta ụgbọ ala kụrụ mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
Ejikọtara ọnụ, nke ahụ pụtara na e nwere ihe dịka 0.0012-percentohere ịpịa n'ogeonye obula. Ma olee ihe ọ dị ka nke ahụ na-adịghị mmaonye na-agba ígwèonye nwere nsogbu ojoo na aụgbọ ala?18.01.2016
Abịa n’ịnyịnya igwe kwụ otu ebe, ịnya ịnyịnya abụọ dị egwu, nke pụtara na mkpọka ahụ nwere ike ime eme, ee tụkwasara anyị obi n’isiokwu a ka anyị gafere ụfọdụ ọdịda ndị a na-ahụkarị n’isiokwu a ma nwee olile anya inye gị ụfọdụ ndụmọdụ iji enyere gị aka izere ha. ️ Anyị amaghị na anyị nwere ahụmịhe zuru oke nke na-eburu ụfọdụ isi ihe n'isiokwu a na Hank efunahụla obere akpụkpọ ahụ. Ee edemede a tufuru ọtụtụ akpụkpọ ruo ọtụtụ afọ wee hụ na ọ bụ edemede na-enye ya isi mkpịsị aka, nnukwu connoryeah, ka anyị daa, ee, anyị nọ ebe a, enweela m ugbua oh, ka anyị jiri isiokwu ndị a kwụrụ nke ọma malite isiokwu a, ugbu a ụzọ adịghị mma nwere ike ịbụ isi ihe kpatara ihe mberede, lee anya maka ezughị okè wee chọta akara ị nwere ike ịhọrọ izere okporo ụzọ awara awara na-esote mgbe ị nọ n'otu drivinggbọala otu, ị chọrọ ka ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ gbalịa igosi gị ma ọ bụrụ enwere olulu ma obu ihe ichoro n'okporo uzo.
Ọ bụ a oké ụzọ na-ekwurịta okwu na-anọ mma niile ọnụ, mgbe ị na-enweghị ike ịdabere na ndị ọzọ na agba na otu mgbe m na-ekwu, ma eleghị anya, na-ahapụ a obere ohere n'azụ onye na-agba n'ihu onye na-agba ị ga-enweta a obere ihe Nwee oge ịzaghachi na oghere nke ikpeazụ. Ihe a bu ihe m jidere na pastyeah. Nke a na - adịkarị mgbe ị dabere n’akụkụ akụ, megharịa igwe kwụ otu ebe na ụkwụ gị ga - apịkọ korota ma mee ka ụkwụ gị na - aga n’ime ya. ikuku ma mee ka ị dinara ala na tebụl ma were ezumike na-atụghị anya, ee, ọ dịghị onye chọrọ iwepụ otu n'ime ezumike ndị ahụ na-akwadoghị, ọ dịghị mgbe ị gbadara ala ndị ahụ ma ọ bụ banye na ntụgharị dị nkọ ma ọ bụ mee mgbanwe dị nkọ? Gbaa mbọ hụ na mgbatị gị dị na elekere isii na mpaghara gị dị na elekere iri na abụọ ka ị ga - anọ ala karịa na enweghị ohere ọ bụla ma ọ bụrụ na ị zọnye ụkwụ na asphalt ma hụ na ị ga - ewere oge zuru ezu site n'akụkụ tupu ị kwụọ ụkwụ na echere m na nke a bụ mmejọ a na-ahụkarị nke ọtụtụ n'ime anyị mere, enwetara m ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị n'ọsọ, ị gaghị efunahụ Wheel I tufuru Ka ị ghara ida ụkwụ, gbasie ike na tupu ịmara ya na ị nwekwara ike wepụ ndị otu gị niile, belụsọ na ị ga-apụ n'okporo ụzọ, echere m na nke ahụ mere m kwa ma ọ bụ n'okporo ụzọ ma ọ bụ egwu mgbe ahụ ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na ị ga-abanye na kọntaktị ndị ọzọ na-arụ ọrụ ụgbọ ala gwongworo na ndepụta ahụ na-aga, hmmmy ụgbọ ala chọrọ nhicha Otu mmejọ nke ụfọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme bụ na anyị nọ n'okporo ụzọ akwọ ụgbọala dị obere nso na njem na-ahapụ anyị obere oge iji meghachi omume na ihe, eg
B. ma ọ bụrụ na ọnụ ụzọ ụgbọ ala na mberede meghee n'ihu gị. anyị ma ọ bụ ma eleghị anya, ụgbọ ala na-atụgharị aka n'okporo ámá onye jamesoh gbaghara m ahụghị gị ka ị na-eje ije ka anyị gbalịa igbochi aka ndị ahụ na ihu na ọnụ ọgụgụ kachasị elu bụ ịlele anya maka ndị blinkers ma ọ bụ Gbalịa ma na-ele ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ anya. ị na-ahapụ onwe gị oge mmeghachi omume oge ka ị nwee ike ịkwọgharị mgbe ọnụ ụzọ kapeeti mepere nke ọma, enweghị enyo.
O di nwute, ndi na-agba oji na-ese onwe ha igwe kwụ otu ebe nwere ike ime ka ha ghara ime nke a Schọta okporo ámá maka olulu na ihe egwu ndị ọzọ na izigara ndị enyi gị Snapchat bụ ụzọ dị ngwa iji gbaba na oriọna ma merụọ onwe gị ahụ, kedu ka ị mere? Kwụsị ịnwa idobe ngwaọrụ eletrọniki gị na opekata mpe mgbe a bịara n'ịgba ịnyịnya iji zute ohia ma ọ bụ ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ iji igwe elektrọnik gị, m ga-enyocha ozi gị ma ọ bụ ọbụlagodi ụzọ na ụzọ ị na-apụ ya mere tinye nke a n'akpa uwe gị ka uche gị niile wee dịrị ebe ị na-efe efe ma gbaji ọsọ na-esote ihu n'akụkụ nkuku ị na-atụghị anya na ị ga-ahapụ n'oge ikpeazụ breeki ahụ gafere ss your break point and it na-eme ka ị ghara ịntanetị ka ị wee jidere bench a oke ọdọ mmiri ihe dị ka connor iji mee ka ị ghara ịda mbà ma mechie akụkụ nke ọma ha bụ otu n'ime akụkụ kachasị amasị m nke ịgba ọsọ ọsọ nke adrenaline nọ na otu Smụmụ ọnụ ọchị na ihu m si n'akụkụ a, mana Ọ dị mma, ọ dịla ọtụtụ oge m kwughachiri nke a na ebubo na-ezighi ezi wee mechie n'ime olulu ebe ịnyịnya ibu m na-enweghị ọchị na ihu m, pụta onye ọlụlụ, anyị ee, anyị na-aga n'ụzọ kwa ị bụ nke oma, inwere ike icho obere oru aka, ee umi che anyi Achọrọ kreenu iji mee ka ị pụọ n'ebe ahụ nnukwu crane ahụ rutere wee nweta m ebe a naanị m ga - ewepụ onwe m ka o wee tufuo ọtụtụ agbụrụ ya enwere ihe ole na ole enwere ike ịka mma iji belata ụfọdụ ihe egwu ọ bụrụ na ọ bịa ka ịkọwahie akụkụ ị na-anya na otu nke a bụ ụzọ dị mma iji jiri anya gị n'ihu gị chọpụta ihe nkuku dị ka mgbe ndị ọkwọ ụgbọala nọ n'ihu gị na-amị na brekị na ị ga-ehichapụ ntakịrị ọsọ ọsọ, ọ bụrụ na ịnyịnya n'ihu gị na-eweta ọsọ site na gbagọrọ agbagọ mgbe ahụ ọ nwere ike bụrụ gbagọrọ agbagọ ka i wee buru ntakịrị ọsọ site na ya mgbe naanị gị nọ, aga m akwọ ụgbọala iji nweta ikike gị ịnọ nchekwa , kpochapu ọsọ karịa ka ịchọrọ n'ụzọ a, mgbe ị banyere na ntụgharị ị na-atụghị anya, ịnwere ike ijikwa ya nke ọma ma dị mfe, nso site na ịnya ndị ọzọ na-agba ịnyịnya nwere ọtụtụ elele na nke kachasị mkpa bụ ịmịpụ nke pụtara na ị nwere ike ịchekwa ike na mbọ ma kesaa ọrụ nke ịnwe ịnyịnya buddieshow pro kwụsị iso ndị ọzọ na-agba ịnyịnya na-eweta ọtụtụ ihe ọghọm gị na onwe gị ma kpọtụrụ onye na-agba gị ọzọ bụ ihe kacha mkpa Eyeah nwere ikwu, nso ka onye na-agba ịnyịnya nọ n'ihu gị, ike ga - echekwa, mana ọ ga - mekwawanye ihe egwu A ọtụtụ ndudue ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme bụ ime ka wiilị dị n'ihu gị ma na mberede ọkwọ ụgbọ ala na-agbanwe ụzọ mgbe ị kụrụ olulu ma ọ bụ ihe egwu dị n'okporo ụzọ Vo Vo The wheel na-apụ ma ị kụrụ oche ma ọ bụ , nke ka njọ, onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ n'ihu na-emegharị brek ma nye ịdọ aka ná ntị ọkwọ ụgbọala n'azụ. Ya mere, anyị chọrọ ịnwale izere ịkwanye wiil ahụ n'ihu gị, mana ị nwekwara ike inyekwuo ohere ịkwọ ụgbọala n'ihu ka i wee nwee oge iji meghachi omume mgbe mmegharị gị gbanwere, mana n'otu oge ahụ a na-elekwasị anya na ihu onye na-agba ya na-agwa onye ọkwọ ụgbọala nọ n'azụ ya akara ma gosipụta ihe ọ ga-eme ma ọ bụrụ na ọ gbanwee akara ya, ma eleghị anya na-adọta brek ma ọ bụ ọbụna na-apụ na sadulu ahụ karịa ị nwere ike ịgwa onye a na-agba ụfụ ohere kachasị mma ị ga - ezere ka ị daa n'ọdụ ụgbọ mmiri ebe a matedanke mateoh nke a bụ ihe kachasị mma na anyị chọrọ ịnwale ma zere ịpịpụta ya na mbụ, yabụ ọ bụrụ na ị hụrụ irighiri ihe dị n'okporo ụzọ ma ọ bụ n'akụkụ aka nri ma ọ bụ ọbụlagodi olulu ma ọ bụ iko gbalịa izere ya ma ọ bụrụ na ị nwere ike, mana oge ụfọdụ anyị naanị enweghị ike izere taya dara ada Ya mere, gịnị ka ị na-eme, olee otu ị ga-esi jigide onwe gị ziri ezi mgbe ị malitere ida A? Ọ bụrụ na ịnụrụ na ị na-aga n'oge na-eche ikuku ikuku na-apụta site na taya gị wee gbalịa idobe otu akara ahụ ma ghara ịgbanwee ya. Mgbe ị na-arụ ọrụ na ihu ihu ihu, ịchọrọ ịgbalị ịgbanwe ahụ gị azụ azụ site na na-eme ibu ibu na n'ihu wheel nke pụtara na ị nwere ike sikrob na ọsọ ahụ na breeki ukwuu odi mfe oge ịgbanwe na taya heyconnor yeah ị ga na-akụ n'okporo ụzọ ọzọ City ịnya ụgbọ ala dị ukwuu n'ihi na ọtụtụ dị iche iche ihe, ọ bụ oké n'ihi na-ezipụ na ọ bụ oké iji merie okporo ụzọ, mana site na obodo na-abịa okporo ụzọ jam na-abịa karịa okporo ụzọ na-abịa karịa okporo ụzọ pụtara na ndị mmadụ na-agbakwụnye ọtụtụ ihe ize ndụ ihe anyị ga-ekwu ma ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala na obodo ị na-abịa n'okporo ụzọ na okporo ụzọ ọkụ na gburugburu.
Gbalia ihu gi aka ekpe na aka nri tupu iga n’ihu, ee, ihe ozo di nma na acho ime ka anya gi na ndi ozo n’abia ghara iche na ha ahuru gi ma na otu a ka obodo siri no, o were ogologo oge. iji ruo ebe ị na-aga mgbe niile russian na obodo a nwere ike ibute ihe mberede ihe ọma ọzọ iji gbalịa ịhazi ụzọ gị tupu oge eruo, lezie anya n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè ị nwere ike iwere, onye nwere ike ịgafe n'okporo ámá ndị na-arụsi ọrụ ike ka ị ghara ịbịa gafee ezigbo ebe ndị a na-ekpo ọkụ maka okporo ụzọ, mana iwu ọla edo anaghị agba site na obodo ahụ, ọ bụghị naanị na ọ ga-aka mma ka ị were oge gị wee kwọrọ n'okporo ụzọ ndị a n'okporo ámá ndị dị jụụ hey ee ee na nchịkọta na-anọ na nchekwa n'okporo ụzọ lelee ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ anya, mana karịa ihe niile ị na-eme n'ime ikike gị, ee, enwere m olile anya na ndụmọdụ ndị a enyerela aka izere mkpọka n'ụzọ ụfọdụ anyị tụlere n'isiokwu a, ma ọ bụrụ na ị mere ka anyị mara na ngalaba ndị dị n'okpuru ma ọ bụ nye edemede a nnukwu isi mkpịsị aka elu ma ọ bụrụ na ọ nyere aka na anyị ga-ahụ anyị n'isiokwu na-esonụ uh Olile anya m ga-eme ụfọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a Daalụ Byei na-arụ ọrụ na ya
bụ pistachios dị elu na potassium
Enwere m ike ịgba ndị na-agba ịnyịnya ígwè akwụkwọ?
Nleghara anya bụ, n'ụzọ bụ isi, enweghị nlekọta zuru oke n'okpuru ọnọdụ akọwapụtara, n'okwu a dịka aonye na-agba ígwèn'okporo ụzọ. Ya mere ee, azịza dị mfe bụ na ịnwere ikeịbụgbara akwụkwọmaka ịkpata ihe ọghọm.
A nwere ike ịgba ịnyịnya ịgba ịnyịnya ịgba ụgbọ ala?
N’okwu kachasị dị mfe, aonye na-agba ígwè nwere ike ikwu megideọkwọ ụgbọala mgbe ihe mberede kpatara nke ikpeazụ. N'ọtụtụ oge, agbanyeghị, aonye na-agba ígwèga-adị n'ụtụ ụfọdụ maka ụta maka ihe ọghọm, yana dabere na oke, ikike nke onye ọkwọ ụgbọ ala ga-esi ike nnwale.
Mgbe opekempenọmbankeanyịnya igweonye kwesiri inwe bu nke ato, nke ziri ezinọmbabụ n +1. 1, ebee ka nnọmbankeanyịnya igweugbu a. Enwere ike ideghachi akụkụ a dị ka s -1. 1, ebe s bunọmbankeanyịnya igwenwere nke ga - ebute nkewa site na onye òtù ọlụlụ gị.25.10.2018
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na onye na - agba ịnyịnya ígwè akụrisị ụgbọ ala m Australia?
Ọtụtụ pukundị na-agba ịnyịnya ígwèna-emerụ ahụ mgbe ọ na-agba ịnyịnya kwa afọ. Iwu ndị ewepụtara na Disemba 2017 pụtara nke ahụỌ bụrụị kwadoro mmerụ ahụ na aụgbọ alaọghọm mgbe ahụ ị nwere ikike ịkwụ ụgwọ n'okpuruiheNSW Mberede Mberede Mbipụta Iwu 2017.02/27/2020
Enwere m ike ịgba akwụkwọ megide onye na-agba ịnyịnya ígwè?
Iwu kwadoro ndị ọkwọ ụgbọala ịnwe mkpuchi, ọ bụkwa site na iwu a ka ndị merụrụ ahụonye na-agba ígwèga-enwe ikeMgbarakwaịkwụ ụgwọ, ma maka mmerụ ahụ na ụgwọ ndị metụtara ya, na mmebi ahụ emere na ihe onwunwe, echiche ego dị mkpa na ụfọdụ ịnyịnya ígwè ugbu a na-efu karịa ụgbọ ala.
Ugboro ole ka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-ada?
Azịza Ya: MbụNdị ọgba tum tum:Ugboro ole kagịokukuma ọ bụ daa na ihe na-akpatakarị ya? Ihe dị ka ugboro 7 n’afọ gara aga.
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị jiri ụgbọ ala gị see onye na - agba ịnyịnya?
I jiri ụgbọ ala gị see ụgbọ ịnyịnya ígwè nwere ike ịtụ onye ọkwọ ụgbọ ụjọ - na - egbu egbu maka onye na - agba ya. Ọ dị mkpa na ị ga-eme ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ihe mberede emee, ma buru nchekwa nke onye ọ bụla n'uche. Ọ bụrụ na ị kụrụ onye na-agba ịnyịnya ígwè, ịkwesịrị ibu ụzọ kwụsị ma jekwuru onye ahụ nwere ike ịnwe ya.
Kedu ụdị ihe ọghọm nwere ike ime igwe kwụ otu ebe?
Pesdị Ihe Mberede. Nri aka nri, ebe ụgbọ na-agafe onye na-agba ịnyịnya ígwè nke na-agba n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ ubu aka nri na-aga otu ụzọ, wee mezie nri ozugbo gaa n'ụzọ onye ahụ na-agba ígwè. Ọnọdụ ndị ọzọ nwere ike ịgbapụta, dị ka ọnụ ụzọ ụgbọala abanye n'ụzọ onye na-agba ígwè, ma ọ bụ ọnọdụ njedebe.
Kedu ihe na-eme mgbe ụgbọ ala kụrụ gị mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè?
“Anọ m naanị n’ọnwa na-abịa naanị m n’ụlọ m na-eji tagzi azụ ma na-aga n’ihu n’ihi na ewepụrụghị m ịla ụlọ na United States. Apụrụ m ịnyịnya ígwè ahụ ruo ihe dị ka ọnwa isii; nke ahụ bụ nsogbu na patella gbawara agbawa, ọ naghị agwọ ngwa ngwa.